Umatilasi osetshenziswe ngokwezifiso kanye nentwasahlobo yebhokisi iyathengiswa Umkhiqizi | Rayson
Ngokuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle kakhulu okukhiqiza, kanye nenkonzo ephelele, uRayson uyahola embonini manje futhi usabalalisa iRayson yethu emhlabeni wonke. Kanye nemikhiqizo yethu, izinsiza zethu nazo zihlinzekwa ukuze zibe sezingeni eliphezulu. umatilasi osetshenzisiwe kanye nesiphethu sebhokisi siyadayiswa URayson ungumkhiqizi obanzi kanye nomphakeli wemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nesevisi yokuma okukodwa. Sizohlinzeka, njengenjwayelo, ngenkuthalo izinsizakalo ezisheshayo ezinjalo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nomatilasi esisetshenzisiwe nesiphethu sebhokisi esithengiswayo neminye imikhiqizo, vele usazise.Lolu cezu luyindlela yokukhuluma yomuntu siqu. Inikeza ogqokile ithuba lokwenza isitatimende emhlabeni mayelana nomuzwa wakhe wobuhle nobuhle.